Petpals Franchisee na-ewere 'Ahịa' ma Zụta Ala Ọhụrụ! | Franchiseek
Petpals Franchisee na-ewere 'Ahịa' ma Zụta Ala Ọhụrụ!
»Petpals Franchisee na-ewere 'Ahịa' ma Zụta Ala Ọhụrụ!
Ntọhapụ pịa - Maka Mwepụta Ozugbo
Ihe onyonyo: David na Sallyann Gray (Petpals Darlington, Yarm na Stockton)
Petpals franchisee na - ewere 'ngwaahịa' ma zụta ókèala ọhụrụ
David na Sallyann Gray, ndị nwere Petpals Darlington na Yarm, otu n'ime franchise franchise nke ọma na netwọkụ Petpals na ndị meriri nturu ugo Top Franchise na 2019 Petpals na nturu ugo, agbasawanyela alaeze nlekọta anụ ụlọ ha, nweta Petpals Stockton, nke ha nwere rere ere gara aga afọ asatọ gara aga.
Di na nwunye nke na - arụ ọrụ karịrị 20 ugbu a, ga - enwe ókèala nke ga - ekpuchi ihe karịrị 100 square kilomita site na ọdịda anyanwụ Darlington ruo n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Stockton na Tees. Ala ọhụrụ ahụ, Petpals Stockton ga na-enyezu ọrụ nlekọta anụ ahụ Petpals, gụnyere ije nkịta na ịbanye, nlele cat na obere nleta ụmụ anụmanụ na ịbanye.
Onye nwe Devid kwuru,
'Anyị resịburu Petpals Stockton na Christine Duncan laa azụ na 2012 ka anyị wee lekwasị anya na Darlington na Yarm; Mkpọchi nyere Sal na mụ oge ịtụgharị uche na azụmaahịa anyị ma kpebisie ike na anyị chọrọ ịgbasa, yabụ mgbe Christine kwuru okwu ya na ọ dịla njikere ịre ókèala a, ọ bụ azịza doro anya azịza ya ma webata ya na ezinụlọ. '
Na-ekwu maka aka Sallyann kwuru,
Ọ dịla anya ịlaghachi azụ na ụfọdụ ndị ahịa ochie anyị bụ ndị anyị hapụrụ azụmahịa ahụ afọ asatọ gara aga, ndị ka bụ ndị ahịa taa. Anyị na-ele anya mgbanwe a na-agaghị enwe ọfụma dị ka Christine ga-anọgide na-abụ onye njikwa na-agagharị nkịta anyị, ya na ndị otu ya abụọ na-eme mgbanwe ugbu a. '
N'ikwu okwu banyere ihe ịma aka nke ọnwa ise gara aga nke ọrịa nje Corona David kwuru,
'Nke a enweghị obi abụọ a bụ otu n'ime oge kachasị sie ike na ndụ azụmaahịa anyị mana na agbanyeghị ọkwa azụmaahịa nke onye ọ bụla, anyị na-aga n'ihu na-azụ ndị ahịa ọhụụ kwa ọnwa ma nwee nchekwube na anyị ga-alaghachi ike oge na-adịghị anya. Anyị eguzobela ụkpụrụ siri ike n'ihe banyere ilekọta anụ ụlọ n'enweghị nsogbu n'oge ọrịa, site na usoro ịdị ọcha bụ isi nyefee na usoro nchịkọta. Anyị anaghị ahapụ ihe ọ bụla ohere ma chọọ imesi ndị mmadụ obi ike na anyị na-ewere ahụike nke ndị ahịa anyị, ndị ọrụ na anụ ụlọ.
'Partbụ akụkụ nke franchise enyerela anyị aka mee ka mmiri zoo COVID-19. Nkwado anyị natara n’aka isi ụlọ ọrụ n’oge mkpọchi dị ukwuu, na-eme ka anyị mata banyere nduzi ọhụụ sitere na DEFRA na Gọọmentị ma na-eduzi anyị site na nhọrọ nkwado ego dị na mgbakwunye, na-enwe ikike iji bulie ekwentị gaa na nke ibe Petpals franchisees anyị. , ikwu okwu banyere ụzọ anyị ga-esi gaa n’ihu, ndị ọrụ na-eme mkpọtụ, ma ọ bụ ka ịzọọ onwe anyị ma nwee nkata nyeere anyị abụọ aka nke ukwuu; ọ gaara esiri gị ike ịhapụ naanị ya. '
'David na Sallyann bụ ezigbo ihe atụ nye ndị France niile. Ha bụ 100% nyefere ndị ọrụ ha, ndị ahịa ha, anu ulo na n'ikpeazụ, azụmahịa ha. Ha bụ ndị nnọchianya mara mma maka akara Petpals ma na-emesapụ aka na nkwado ha na onye ọ bụla nọ na netwọkụ, na-ekerịta ihe ọmụma ha niile.
'COVID-19 abụwo oge siri ike nye ọtụtụ ma oge niile David na Sallyann weghaara ya n'ụzọ ha, na-agbanwe ma na-emegharị ka anyị niile mụta ịrụ ọrụ na' ihe ọhụrụ a ', bụ ezigbo ngosipụta nke ọkachamara ha.'
EGO AUGUST 2020
Ntuziaka na Editor
Petpals Darlington na Yarm na Petpals Stockton bụ ndị na-eweta nlekọta anụ ụlọ, nlekọta anụ ụlọ, maka ụmụ anụmanụ sitere na nkịta na nwamba na obere anụ ụlọ dịka oke bekee, ahịhịa, nnụnụ na ihe ndị ọzọ.
Ọrụ Petpals Darlington na Yarm na Petpals Stockton gụnyere:
Enwere ike ịkpọtụrụ Petpals Darlington na Yarm na Petpals Stockton na:
Nnukwu Uhie Red Box PR